Apple inowedzera huwandu hwemavara emabhandi anowanikwa kune Apple Watch | Ndinobva mac
Kisimusi iri kuuya, uye senguva dzose, isu tinofanirwa kutanga tonyora runyorwa rwevanhu vatiri kuronga kupa chipo. Yekupedzisira Nhema Chishanu ndeimwe yeiyo inguva dzakanakisa dzegore kutora mukana weizvi kutenga, kunyanya kana izvo zvatinoda kupa chiri chigadzirwa chemagetsi.
Asi isu tinogona zvakare kutenga zvishongedzo zvezvinhu izvi zvemagetsi, senge pane dzimwe nguva tambo yeApple Watch. Kubva payakatangwa, ndaizofungidzira, izvo Apple yaita mari yakawanda kutengesa tambo kupfuura chishandiso panyama. Kufungidzira kwangu padivi, ivo vakomana kubva kuCupertino vakawedzera mavara matsva kune huwandu hwemitambo yezvikwata zveApple Watch.
Mushure mekutenga mamwe matambo, ese epakutanga uye echiChinese, mhando yeApple tambo inoonekwa, kunyangwe kana iwe ukaishandisa zvakanyanya, vanopedzisira vabata tsvina isingaperi uye hazvigoneke kuchenesa nekuda kwemakemikari mazhinji yaunoshandisa. Matambo echiChinese anofanirwa kushandiswa pano neapo asi kwete kakawanda, nekuti hunhu hwechinhu chakashandiswa hachina kufanana uye ziya raunokonzeresa rinogona kuwanda muzviitiko zvakasiyana.
Paunenge iwe uchienzanisa mitengo, iwe unoona sekunge nemutengo wepakutanga Apple tambo, unogona kutenga chinas gumi, asi zvakadaro, ndiyo imwe nyaya. Mavara matsva emabhendi emitambo ayo Apple achangowedzera ndeaya Neon Yero, Turmeric Orange (iyo imwechete inoshandiswa muHermès renji rezvikwata) uye Rima Tema.
Aya mavara anotipa anotaridzika kutarisa, mune iyo iyo neon yero, uye maererano nemwaka wegore ratiri uye watichapinda mumazuva mashoma, mune mabhanhire turmeric orenji uye teal. Aya mabhande akatemerwa pamakumi mashanu emaeuro uye anowanikwa, pamwe chete neyechinyakare mavara, zvakananga muInternet uye epanyama App Store.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Accessories » Apple inowedzera huwandu hwemabhandi mavara anowanikwa kuApple Watch